Igumbi Le-butterfly - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguAndrew
Igumbi leButterfly linemotif yebhabhathane kwaye lineebhedi ezimbini ezingatshatanga zeendwendwe ezimbini ezahlukeneyo okanye zenziwe njengebhedi enkulu. Undazise ukuba yeyiphi onokuyikhethaIgumbi likumgangatho wokuqala kunye ne-tv. Ineebhodi eziphantsi. Ishawa, isinki kunye neWC zikumgangatho omnye. Iphephadonga lebhabhathane lilindele iindwendwe ukuba zifake umbala omnye ngeSharpies.
Indlu ikwimigangatho emine. Isidlo sakusasa sifumaneka nanini na xa uthanda kwigumbi lokutyela.
4.95 out of 5 stars from 394 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-394
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi394
Indlu yam iphakathi eBrighton. Yonke into ikwimizuzu elishumi yokuhamba, kodwa indlela ithandeka kwaye izolile, njengoko zimbini iindlela ukusuka kwindlela enkulu.
Izimvo eziyi-2 471
Ndihlala ndonwabile ukukhomba iindawo zeendwendwe ukutyelela eBrighton. Ndiyakuthanda ukuya kwimephu yesixeko sam kunye neendwendwe. Nangona kunjalo, ukuba ungathanda ukuhlola, sisixeko esihle sokuhambahamba. Kungekudala uza kufunda indlela yakho. Zingaphezu kwama-800 iindawo zokutyela kunye nee-pubs ezininzi, iiklabhu kunye nemivalo.
Ndihlala ndonwabile ukukhomba iindawo zeendwendwe ukutyelela eBrighton. Ndiyakuthanda ukuya kwimephu yesixeko sam kunye neendwendwe. Nangona kunjalo, ukuba ungathanda ukuhlola, sis…